Vidim-bola virtoaly virtoaly mivantana, varotra dizitaly an-tserasera
Vola virtoaly vola amin'ny fotoana tena izy, fifanakalozana virtoaly virtoaly amin'ny aterineto 18 Oktobra 2021
Litecoin sarimihetsika mivantana
Ethereum Classic sarimihetsika mivantana
Ny tahan'ny vidin'ny dinika dizitaly eto amin'ny tranokala dia mampiseho ny taham-pandrosoana haingana an'ny dinika dizitaly rehetra ankehitriny amin'ny tena fotoana. Ny tahan'ny Dinika dizitaly dia kajiana ho salan'isa amin'ny fifanakalozana rehetra ankehitriny. Azonao atao ny manaraka ny dinamika amin'ny tahan'ny vola elektronika amin'ny Internet ary mahita ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana tsara indrindra amin'ny dinika dizitaly amin'ny fividianana sy ny fivarotana.
Ny tahan'ny fifanakalozana dinika dizitaly amin'ny tranokalanay dia havaozina amin'ny Internet isaky ny 30 segondra. Mianara fifanakalozana fifanakalozana crypto, maimaimpoana, amin'izao fotoana izao.
Ny vola Crypto dia amidy amin'ny tsenam-bola crypto sy fifanakalozana fifanakalozana crypto. Tsy tahaka ny vola mahazatra, tsy misy olona mametraka ny tahan'ny crypto ho an'ny anio na rahampitso. Mandritra ny fifanakalozana dinika dizitaly tsirairay dia miova ny tahan'ny fifanakalozana dinika dizitaly amin'ny elanelam-potoana hafa. Mba hahafantaranao tsara ny tahan'ny dinika dizitaly, dia mila manisa avy hatrany eo amin'ny salan'ny fihenam-bola amin'ny tsenam-bola crypto rehetra ianao.
Ny tranokala cryptoratesxe.com dia mihevitra, ary amin'ny alàlan'ny fomba an-tserasera, ny tahan'ny antontan'isa antonontonony haingana eo amin'ny dinika dizitaly amin'ny tsena crypto rehetra.
Ny dinamika amin'ny tahan'ny dinika dizitaly dia manara-maso tsy tapaka amin'ny crypto amin'ny tsenan'ny crypto rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Azonao atao ny manara-maso ny dinamika amin'ny taham-panakalozana dinika dizitaly amin'ny havana iray hafa amin'ny alàlan'ny widgets manokana. Ny tahan'ny crypto dia aseho amin'ny endrika tabilao sy isa, i.e. ny fiovana amin'ny dinamika dinika dia aseho amin'ny sehatra mitokana ho isan-jato. Ny fiakaran'ny tahan'ny sy ny fihenan'ny vola dia aseho amin'ny loko samihafa.
Jereo ny tahan'ny dinika dizitaly tsara indrindra amin'ny Internet.
Ny tahan'ny dinika dizitaly tsara indrindra, ny dinamika amin'ny fitomboana sy ny fihenan'ny vidin'ny dinika dizitaly dia azo zahana amin'ny alàlan'ny tabilao fanovana eo noho eo amin'ny vidin'ny dinika dizitaly eo amin'ny habaka tranonkala na eo amin'ny pejy fifanakalozana amin'ny tahan'ny fifanakalozana dinika dizitaly voafidy amin'ny Internet. Ny iray amin'ireo fomba ahafahana manara-maso ny tahan'ny tsara indrindra dia ny fitandremana tsy tapaka ny tahan'ny fiovan'ny dinika dizitaly voafidy amin'ny Internet ary rehefa maneho ny sandan'ny vidiny kely indrindra ny tabilao dinika dizitaly, dia ity no fotoana tsara indrindra hividianana, ary raha ny ambony indrindra - hivarotra crypto .
Ilay dinamika an'ny Bitcoin androany 18 Oktobra 2021 an-tserasera
Ny dinamika an'ny tahan'ny Bitcoin ankehitriny no fampahalalana an-tserasera lehibe indrindra ampiasain'ny ankamaroan'ny olona. Azonao atao ny mahita ny dinamika an'ny tahan'ny Bitcoin ho an'ny androany na amin'ny dinika dizitaly na amin'ny sandan'izao tontolo izao amin'ny tranokalanay an-tserasera.
Mampiseho ny dinamika amin'ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny habetsaky ny vola virtoaly rehetra isika ary fantatsika ny tahan'ny fa tsy ho an'ny anio ihany, fa eo koa ny tantaran'ny dinamika ny tahan'ny ho isan'andro.
Ilay dinamika an'ny Ethereum androany 18 Oktobra 2021 an-tserasera
Ny dinamika ny Ethereum ankehitriny - ny taham-pahavitran'ny Ethereum izao dia eo am-barotra rehetra eo amin'ny tsenam-bola crypto eran'izao tontolo izao, izay aseho an-tserasera eo amin'ny Internet ny tranokalanay. Ny dinamika an'ny tahan'ny Ethereum ny dolara dia mamaritra ny tahan'ny Ethereum amin'ny vola hafa sy ny dinika dizitaly.
Ilay dinamika an'ny Litecoin androany 18 Oktobra 2021 an-tserasera
Ny dinamika an'ny Litecoin an-tserasera anio - ny salanisan'ny Litecoin dia eo amin'ny fifanakalozana fifanakalozana crypto, izay aseho eo noho eo amin'ny lafiny ety amin'ny Internet .
Ny dinamika ny tahan'ny Litecoin ny dolara dia mamaritra ihany koa ny dinamika an'ny Litecoin amin'ny vola hafa sy ny dinika dizitaly.
Ilay dinamika an'ny XRP androany 18 Oktobra 2021 an-tserasera
Ny dinamika an'ny XRP amin'izao fotoana izao amin'ny Internet - ny salanisa XRP kosa dia eo amin'ny varotra crypto izao. Ny fanarahana ny tahan'ny fifanakalozana dia indroa isa-minitra dia ahafahanao mampiseho ny tena dinamika amin'ny tahan'ny crypto.
Ny dinamika ny tahan'ny XRP ny dolara dia mamaritra ihany koa ny dinamika an'ny XRP amin'ny asa hafa rehetra an'ny vola virtoaly eran'izao tontolo izao.